I-JA Solar ibonelela ngombane oluhlaza kwiMidlalo ezayo eBeijing
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » I-JA Solar ibonelela ngombane oluhlaza kwiMidlalo ezayo eBeijing
Njengomxhasi wophuhliso oluluhlaza, i-JA Solar ijoyine ngokusebenzayo uluhlu olubonelela ngombane oluhlaza kwimidlalo ezayo eBeijing. Ifumaneka eZhangjiakou, kwiPhondo laseHebei, iGuyuan 200MW yemfuyo kunye neprojekthi yokuhlanganiswa kwelanga iya kubonelela ngamandla ohlaza kumcimbi wezemidlalo obalulekileyo kunye nazo zonke iimodyuli ze-monocrystalline eziphezulu ze-JA Solar. Le projekthi iza kuvelisa umbane ozizigidi ezingama-430 kWh ngonyaka, olingana nokunciphisa ukusetyenziswa kwamalahle ngeetoni ezingama-129,000 kunye nokukhutshwa kwekharbon diokside ngeetoni ezingama-300,000.
Ngokudityaniswa kokufuywa kwezilwanyana kunye nokuveliswa kwamandla ePV, iprojekthi, ilungelelaniswe kakuhle nemozulu epholileyo yengca eGuyuan, ibonelela ngokutya okwaneleyo kwemfuyo ngelixa ivelisa umbane omninzi, ngaloo ndlela isebenzisa ngokufanelekileyo ubutyebi bomhlaba ukuphumeza izibonelelo zokuphumelela kuzo zombini. uqoqosho kunye nokusingqongileyo.
Njengomqhubi weteknoloji entsha kwishishini le-PV, i-JA Solar izibophelele ekukhuthazeni ukuhlanganiswa kwemveliso, ukufundisa kunye nophando. E-Zhangjiakou, isixeko esibambene nemidlalo, ukhuphiswano lwesithathu lweSolar Decathlon China (SDC) lusandula ukubanjwa njengoko bekucwangcisiwe. Ixhaswe yi-JA Solar, kwaye iyilwe ngamaqela e-SolarArk 3 kunye ne-XJTU +, i-eco-saving-energy eco-houses eneenkqubo zelanga ziye zakhiwe ngempumelelo. Ezi zindlu ze-eco, ezifakwe kunye ne-JA Solar DeepBlue iimodyuli eziphezulu ze-3.0 kwaye zijolise "kuphuhliso oluzinzileyo, ukudibanisa okuhlakaniphile, kunye nempilo yabantu," ngumzekelo ekukhuthazeni nasekusetyenzisweni kwe-photovoltaics.
Isiganeko esilindelwe kakhulu eBeijing, sijoliswe ukuba sibhalwe kwimbali kumxholo wokungathathi hlangothi kwekhabhoni yehlabathi, xa ngokokuqala ngqa kwimbali ye-100 yeminyaka, zonke iindawo ziya kuba yi-100% ehlanganiswe ngamandla aluhlaza.
Kunjengokuba intetho isithi: “Amanzi angcwengileyo neentaba eziluhlaza zilungile njengeentaba zegolide nezesilivere.” Indawo yokuhlala engcono yile nto siyilangazelelayo kwaye ngokuthatha imidlalo eBeijing njengethuba, iJA Solar ijonge phambili ekusebenzeni nabathengi abadala nabatsha ukuze basasaze ingqikelelo yophuhliso lwekhabhoni ephantsi kunye nohlaza kunye nokukhuthaza ukwakhiwa iZero Carbon Society.